China Meltblown mpanamboatra lamba sy mpamatsy | Teknolojia Shouzheng
Ny kalitao sy tsara aorian'ny serivisy amidy dia azo antoka:
1. Rafitra rafitry ny vokatra.
2. Fitaovana famokarana mpamokatra sy ny fizahana kalitaon'ny vokatra.
3.Modern Management standard natolotry ny injeniera zokiolona.
4.Competitive vidin'ny orinasa amin'ny fotoana haingana fandefasana.
Anaran'ny vokatra Melt-Blown lamba tsy roa
Material Lamba tsy lamba mitokana
fifehezan viscose + polyester na namboarina manokana
Pattern Lafatra, boloky, Emobossed na namboarina
Color fotsy na namboarina
Weight 20gsm / 25gsm / 30gsm na namboarina manokana
sakany 175mm, 260mm na namboarina manokana
Fampiasana Tarehimarika tarehy, kitapo, fambolena, lamba soratra, hôpitaly, indostria, fanaka,
Kiraro, Auto, Jono
Ny habetsaky ny kitapo / horonan-tsary / boaty namboarina
fonosana Sarimihetsika, kitapo PE OPP kitapo, boaty taratasy na namboarina
MOQ 1 Tonony
Production Lead 7-15 andro
Ny toetra mampiavaka ny fahalemem-panahy: manana fahalefahana tsara, izay mety mifanentana tsara amin'ny hoditra ary manarona ny tenda amin'ny hoditra.
Mahomby: tsindry bitika roa sosona izay mety handresy hamandoana tsara kokoa. Maivana, manify, mangarahara. Ny lamba tsy misy tazomoka dia vokarina amin'ny kitapon'ny rano manerinerina izay mikoriana ao anaty tranonkala, ary mifamory ny fibra mba hahatonga ny fibre malefaka ho lasa matanjaka sy matevina tanteraka.
1) Fitaovana enta fanasiana entona: saron-pitsaboana, ny rivotra iainana an-efitrano
2) Maskraikan'ny mpitsabo sy ara-pahasalamana: ny sosona anatiny sy ivelany miaraka amin'ny fitaovana spunbond, afovoany dia miempo amin'ny menaka mitsoka.
3) Fitaovana miaro ny tontolo iainana (akora mpitroka solika) Ny akora meltblown nonwovens no tena fitaovana PP. Izy io dia afaka mandany 17-20 heny noho ny lanjan'ny menaka manokana, amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, azonao atao ny mahatsapa ny fampidiran-dra, ny menaka ny solika, sns., Dia ampiasaina amin'ny fantsom-barotra an-dranomasina, fitaovam-pambolena, fitsaboana ny fanodinana sy ny sisa.
4) Ny akanjon'ny akanjom-bolo dia mampihena ny tsy misy ivonin'ny mikrôlo ao anaty harato, ka tena mahatsapa azy. Ary ny lamba vita amin'ny vovo-javamaniry kely, porom-piainana avo, ny fanoherana ny rivotra sy ny fisondrotan'ny rivotra tsara, ny lanja maivana, ankehitriny dia manao fitaovana tsara indrindra ho an'ny fitaovana insulation akanjo.
Tekno trano, Fambolena sy zaridaina, fanaka, lambam-pandriana, lamba latabatra, sns.
(20-70gsm): Sarona fambolena, fonon'ny rindrina, fitsaboana ary fahadiovana: toy
lampin-jaza, satroka fandidiana, saron-tava, akanjo mainty
(70-100gsm): hodi-trano: kitapo miantsena, am-paosy, kitapo fanomezana, sofa
akorandriaka, lohataona- volonasy, lamba lamba
(100-200gsm): varavarankely jamba, saron'ny fiara
Previous: Karatra fanadiovana
Lamba-lamba tsy miohatra amin'ny lamba